Pyae Phyo (MMiTD): ♪ " Huawei Nova2Plus VS Samsung Galaxy J7 Max " ♫
♪ " Huawei Nova2Plus VS Samsung Galaxy J7 Max " ♫
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ Huawei Nova2Plus နဲ့ Samsung Galaxy J7 Max ဆိုတဲ့ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း2လုံးရဲ့ ကွဲပြားမှုတွေနဲ့ တူညီတဲ့အချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြောပြသွားပါမယ်။ ၎င်းဖုန်း2လုံးစလုံး ထွက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကလည်း အတူတူပဲဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကမှ ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရှိလာကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ Huawei Nova2Plus က Samsung Galaxy J7 Max ထက် ပိုမြင့်မားပါတယ်။ ကင်မရာစွမ်းအားပိုင်းမှာ Nova2Plus က J7 Max ထက် တော်တော်လေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး အလေးချိန်လည်း ပိုမိုပေါ့ပါး ပါတယ်။ Nova2Plus ရဲ့ Fingerprint sensor က နောက်ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး J7 Max ကတော့ အရှေ့ဘက် Home Button မှာ တွေ့ရပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းတွေကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖုန်း2ခုလုံးမှာ Nano SIM card2ကတ်ကို တစ်ပြိုင်တည်း ထည့်သုံးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Nova2Plus မှာ Internal memory 128GB ပါရှိပြီး J7 Max မှာတော့ 32GB သာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်း2ခု လုံးမှာ Micro SDcard ကို 256GB အထိ ထပ်မံစိုက်ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
1. Huawei Nova2Plus
Huawei Nova2Plus ရဲ့ အရွယ်အစားက 153.9 x 74.9 x 6.9 mm ဖြစ်ပြီး 169g လေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ထည်ကပါးလွှာပြီး အလေးချိန်လည်း ပေါ့ပါးပါတယ်။ ၎င်းကို Aurora Blue, Grass Green, Streamer Gold,Obsidian Black, Rose Gold ဆိုပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
2. Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max ရဲ့ အရွယ်အစားက 156.7 x 78.8 x 8.1mm ရှိပြီး 179g အလေးချိန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနည်းငယ်ပိုထူပေမယ့် ပိုမို လေးပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ အမည်းရောင်နဲ့ ရွှေရောင် အရောင်2မျိုးကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက် RAM 4GB ပါရှိတဲ့ HiSilicon Kirin 659 chipset, Octa-core (4x2.36GHz Cortex-A53 & 4x1.7GHz Cortex-A53) processor နဲ့ Mali-T830 MP2 GPU တို့ကို ပံ့ပိုးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေက ကောင်းမွန်မှုရှိပါတယ်။
J7 Max မှာတော့ Mediatek MT6757 Helio P20 Octa-core 2.4GHz Cortex-A53 Processor နဲ့ Mali-T880MP2 GPU တွေကို သုံးထားတာကို တွေ့ရတာကြောင့် စက်စွမ်းဆောင်ရည်က မတိမ်းမယိမ်းရှိပြီး ရုပ်ထွက် ပိုကောင်းပါတယ်။ RAM စွမ်းအားခြင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။
မျက်နှာပြင်အကျယ်5လက်မခွဲရှိပြီး LTPS IPS LCD capacitive touchscreen display အမျိုးအစားကို သုံးစွဲထားပါတယ်။ ပြသပေးနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းစွမ်းအားက 1080 x 1920 pixels ရှိပြီး 1 လက်မ သိပ်သည်းဆက ~401 ppi pixels ပမာဏရှိပါတယ်။
Galaxy J7 Max က မျက်နှာပြင်အကျယ်မှာ Nova2Plus ထက် 0.2-inch ခန့် ပိုကျယ်ပြီး IPS LCD capacitive touchscreen display ကို သုံး ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြသနိုင်မြင်ကွင်းစွမ်းအားကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ဖုန်း2ခုလုံးမှာ multitouch စနစ်ကို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
Huawei Nova2Plus ရဲ့ အနောက်ကင်မရာက Dual 12 + 8MP, f/1.8 aperture ပါရှိပြီး အရှေ့ကင်မရာမှာ 20MP တောင် ရှိတဲ့အတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီအနေနဲ့ကတော့ Non-removable Li-Po 3340mAh battery ကို အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Galaxy J7 Max ရဲ့ အနောက်ကင်မရာက 13MP နဲ့ f/1.7 aperture စွမ်းအားပါရှိပြီး အရှေ့ကင်မရာကလည်း 13MP, f/1.9 aperture တွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်မရာစွမ်းအားမှာ Nova2Plus လောက် မကောင်းပေမယ့် အရည်အသွေးမြင့်မားပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့ Non-removable Li-Ion 3300mAh battery ဖြစ်ပါတယ်။